Ogaden News Agency (ONA) – DR Maxamuud Uggaas: Dadkan aad la hadlaysaan (Ethiopia) Ma fahmayaan Luqada Ingiriiska!
DR Maxamuud Uggaas: Dadkan aad la hadlaysaan (Ethiopia) Ma fahmayaan Luqada Ingiriiska!
Dr Maxamuud Ugaas oo kamid ahaa Ergadi ka qeyb gashay Wada xaajoodka ONLF iyo Gumeysiga Ethiopia ayaa ka hadlay Shirkii weynaa ee ka dhacay Magaalada Nairobi. Dr Maxamud Ugaas waxuu ka qeyb galay wada xaajoodki dhicisoobay isaga oo matalaya ururada Bulshada ee Somalida Ogadeniya (Civil Society).
Hadaba Dr Maxamuud Ugaas ayaa kulankii weynaa ee Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Wadanka Kenya kaqeybgalay waxuuna uu sheegay shacabweynihii kasoo qeyb galay hadaladi la is dhaafsaday ee Jabhada ONLF eragadi ka socotay iyo Gumeysiga dhexmaray.
Dr maxamuud Ugaas ayaa sheegay in Gumeysiga ergadii kasocotay lafahmi waayay waxa ay rabaan taas oo lagu wareeray. Waxaana markii danbe lanoo sheegay ayuu yiri Dr Maxamuud Ugaas. Qoloadan aad la hadlaysaan mafahmayaan afka Ingiriiska.
Hadaba Su’aashu waxa weeye Afkee lagula hadlaa gumeysiga Ethiopia oo ay wax ku fahmaan.
Ruwayadi Hagardaamo Gumeysi Halgamaa wax mayeesho ee Ururka dhalinta Ogadeniya ee wadanka ingiriisku sameeyeen sanadkii 2010. ayaa waxa ku jiray qiso lamid ah midaan. Waxaa ruwayaadaas lagu soo bandhigay Gumeysiga Ethiopia iyo shacabka Ogadeniya oo wada xaajoonaya. Waxaana gumeysiga laga af gartay Saxiix dastuurka Ethiopia (Midnaanta Ethiopia) midaas oo lala yaabay. Shacabkii ayaa ku yiri adigu saxeex Muqadasnimada Ogadeniya. Markii la ismari waayay ayaa waxaa la isweydiiyay inaysan luqada lagula hadlayo aysan garanayn gumeysigu. Waxaana lagu dayaa luqada farobadan bal inay wax fahmaan. Waxaana gumeysiga Lagula hadlaa Luqada Somaliga, Midka Ingiriiska, Midka Chineseka, Midka Ducth-ka (Hollandiska) iyo luqado badan oo caalamka looga hadlo. Intaasba waa fahmi waayan.
Waxaas oo luqad ah marka lagu eegay Gumeysigu wali waa soo taagna oo waxa uun ku hadaaqayay “saxiix warqadan.”
markii danbe ayaa waxaa lagu tijaabiya Xabad. Midaas ayuuna wax ku fahmay oo meeshi uu taagnaa kaga dhaqaaqay.
Gumeysiga Ethiopia waxa uu wax ku fahmaa waa qoriga Caaradiiis.
hoos ka daawo ruwayadi hada ka hor Arrintaas looga hadlay